Ny Malagasy sy ny fakana tahaka – Malag@sy Miray
Tsy lavina ny tokony sy tsy maintsy hifampiankin’ny olombelona. Saingy mampalahelo fa eo amin’ny sehatra maro samihafa amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona dia tsy hita loatra izay vokatry ny saina Malagasy (izaho tsy miteny hoe tsy misy an!) na zavatra namboarina Malagasy ampiasaina. Misy vitsy ihany eny ananonanona eny. Fa mba voatrandraka sy omen-danja ho afaka mivelatra ve izy ireny ?. Voka-pikarohana maro no mipirina any ho any noho ny tsy fisiana na noho ny tsy fahampian’ny hoenti-manana, fikaonan-doha maro no efa nalevin’ny andro sy ny taona. Milevina anaty vovoky ny fanadinoana sy lanin’ny koroka ny antontan-taratasy sy boky mitahiry azy ireny. Noho ireo voatanisa ireo dia ny vokatry ny saina vahiny no ketrehina hampandroso an’I Madagasikara. Eny fa na dia ny M.A.P. aza dia misy mpanao gazety milaza fa hala-tahaka avy any ananona any izy io no narindran-dRamalagasy. Aza gaga àry raha tratry ny tamberin-tany eto an-toerana sy tsy tafavoaka ny valan’ny moramora eto foana isika mianakavy. Mba tsy hihemotra aza, sanatriavina !
Amin’ny andavanandrom-piainana, eo amin’ny seha-pihariana, raha mba misy ny nivaky loha namoaka voka-pikarohana, dia misy koa ny vaky loha haka tahaka fotsiny fa tsy mba hamorona (jereo ny CD pirates mameno an’Analakely dia ho tsapanao izay zavatra lazaiko izay). Hala-tahaka ampiasaina amin’ny fomba tsy ara-dalàna sy amin’ny sehatra rehetra mba hitadiavam-bola avy eo.
Rraha voatery tsy maintsy haka tahaka ihany dia sady maka tahaka no mitondra fanatsarana ho an’ilay asa nalaina tahaka, dia handroso « Gasikara ».
Enga anie samy hiezaka hanatsara sy hamorona ny tsirairay.
Par Avylavitra 7 Commentaires
7 novembre 2007 à 17:05
Tena laviko kosa ilay hoe MAP halatahaka! efa nosoratako indrindra io ao amin’ny bolongako sokajy kolontsaina nampitondraiko ny lohateny hoe: « Fa naninona i Jeannot Ramambazafy ». Fifanarahana iraisam-pirenena io fa tsy halatahaka. Tanjona mila tratrarin’ny firenena andalam-pandrosoana rehetra.
7 novembre 2007 à 21:58
Raha ny hevitro izaho samy irery sy ny saiko somary adaladala kanefa aloha dia tsy mahita ny maha-ratsy ny fakantahaka mihintsy. Tsy maintsy atao am-pisainana kanefa izy io… Araky ny tenin’i AvyLavitra hoe raha voatery tsy maintsy haka tahaka ihany dia sady maka tahaka no mitondra fanatsarana ho ansquowhawydilay asa nalaina tahaka, dia handroso Gasikara
Raisiko ohatra ny nippon, tena fakantahaka fotsiny no nataony tamin’ny voalohany, avy eo dia nofeheziny tsara amin’izay ireo zavatra nalainy tahaka, dia jereo, amin’izao ry lairony efa raola mihintsy sa ?
Ny vietnamiana koa dia manao an’io, ary tena ataony tsara mihintsy ilay fakantahaka – ary io mba tiako ho tonga aty mihintsy – ny boky rehetra dia vitan-dry lerony photocopie+reliure madio daholo, dia iny no amidiny etsy sy eroa, dia afaka mamaky boky daholo ny olona satria zakan’ny tsena ny boky. Ny boky original anie tsy zakan’ny tsena aty e ! sa ?
Fa miombokevitra amin’i AvyLavitra aho amin’ny hoe tsy tokony isika samy isika no mifakatahaka satria manjary mifamingana, fa tokony iheritreritra tsara koa ilay mpanonta kapila mangirana, na boky hoe atao takatry ny fahefamividin’ny tsirairay le fika sao wayne eo !
8 novembre 2007 à 5:52
Jentilisa> Ekeko tokoa fa efa namaky iny lahatsoratrao iny aho, ary iny mihitsy aza no nahatonga ahy nanoratra io hoe ‘misy mpanao gazety’ satria tsy nahita ilay nosoratan’i Jeannot Ramabazafy aho raha tsy tay aoriana.
Elsifaka> tsara ilay hoa atao photocopie ilay boky, nefa raha eto amintsika aloha dia tsy maintsy hoenjehina indray fa hoe mambotry ny hafa sy manala baraka firenena. Eo anie no olana e! Nefa raha mijery ny olona mampiana-janaka ‘zao isika, ndeha hividy methode Bocher iray (90.000FMG) ve izy, nefa raha misy mba afaka mampindrana azy hatao photocopie, dia mba moramora kokoa. (ny sary fotsiny amin’izay no tsy hiloko intsony;;)
Raha io resaka boky io dia asa raha mba azo alaina tahaka ilay fomba fivarotana ataon’ilay éditeurs manakarama Gasy ao Antsahabe ao: antsoiny ny raiamandrenin’ny mpianatra ho any amin’ny dia omeny tolotra amin’ny boky vokariny, ary entaniny mba handoa ny vidiny tsikelikely (lafo aloha ny an-dry zareo, fa sao mankany dia izaho no hahazo loza an!) Ka raha mba afaka mano toy izany ireo mpanonta boky eto Madagasikara, dia inoako fa ho betsaka amin’izay ny Malagasy hividy sy hamaky boky… Sao mba tsara halaina tahaka io ???
> Enga anie samy hiezaka hanatsara sy hamorona ny tsirairay
Amiko mila sarahina ny sokajin’ny hala-tahaka « be fahatany » sy ny hala-tahaka « miampy fanatsarana » na « miharo fanovana » mba hirafitra tsara amin’ny toe-javatra misy any an-toerana [copier bêtement ou adapter, s’inspirer]. Ilay voalohany tsy misy fiheverana fa dia ny manao azy ho vita fotsiny, ilay faharoa kosa mikendry tanjona hafa ary fitaovana fotsiny ilay fakana tahaka izay fampiasana lesona no tena fiteny tandrify kokoa.
Io amiko ilay hoe manatsara ary mety ho tena famoronana mihintsy aza 🙂
9 novembre 2007 à 5:50
Hoy ilay mpampianatra anay izany mantsy ny ankizy miseho azy ho be « pourquoi » sy comment .
Rehefa mamorona fiara ny vahiny, hoy izy, dia fantany hoe atao boribory ny kodiarana, dia manao toy izay koa izy, fa ialahy Malagasy mbola lany andro mandinika hoe « fa maninona no boribory, ahoana no ho fitrangany raha natao telozoro? », hany ka tsy mahatsangan-javatra. Andramo atao telozoro ny kodiaran’ialahy aloha dia rehefa tsy mahavita tsara noho ny an’ny vahiny dia ilay boriboriny ihany ampiasaina.
Ny tian-kahatongavana dia hoe : Miainga amin’ny hala tahaka no ahavitan-javatra, raha misy ny hita fa azo hatsaraina dia ny tsaran’ny tena no tànana, raha tsy mahavita tsara noho ny hafa dia ny tsaran’ny olona no alain-tahaka.
Koa rehefa maka tahaka dia na mahavita tsara noho ny an’ny olona, na mitovy lenta, fa raha ratsy kokoa dia izay no misy tsy mahamety azy.
9 novembre 2007 à 8:46
Fony nianatra filozofia ihany koa ny tena ka nampisainina ny amin’ny fampivoarana ny tena hanana ny mahaizy azy dia tsy maintsy niandoha tamin’ny fakana tahaka ihany aloha. Ny zaza ihany koa tsy maintsy maka tahaka izay ataon’ny ray amandreniny na izay hitany hany ka tsy mahagaga raha fandre ny teny hoe « hanahana an’iza moa? » rehefa misy zavatra ataony izay!
9 novembre 2007 à 12:25
Tsara daholo ny hevitra fa dia feno fankasitrahana anareo rehetra ny mpanolotra ny hafatra. « Ny hevitra tsy azo tsy amin’olombelona » , hoy ilay ohabolana iray izay.